[Myanmar] Reactor Training
PROGRAMMESHOLIDAY CAMPREACTOR SINGAPOREဆက်သွယ်ရန်
စွန့်ဦးတီထွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း စူးစမ်းရှာဖွေခြင်း သင်တန်းအစီအစဥ် (Entrepreneurship
ဤ(၇)ပတ်ကြာမြင့်သော သင်တန်းအစီအစဥ်တွင် ကျောင်းသားများကို သူတို့၏ စိတ်ကူးအတွေးအမြင်များ (ideas) ကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကူညီဖော်ဆော်
စူးစမ်းရှာဖွေခြင်း (Exploration) ဟူသောအကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်အောက်တွင် ကျောင်းသားများသည် သူတို့၏ ဝါသနာနှင့်စိတ်ဝင်စားသော အကြာင်းအရာများကိုစူးစမ်းရှာဖွေမှာဖြစ်ပါသည်။ ထို့နောက်သူတို့ဖြေရှင်းချင်သော ပြဿနာခေါင်းစဉ်ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီး ၎င်းပြဿနာများသည် အကူအညီလိုအပ်ချက်ရှိမရှိ စူးစမ်းရှာဖွေသွားရမှာ ဖြစ်ပါသည်။
ဤသင်တန်းအစီအစဥ်သည် ကျွနု်ပ်တို့ Reactor ၏ တမူထူးခြားပြီး စနစ်တကျတိုင်ပင်ဆွေးနွေးတီထွင်ထားသောနည်းစနစ် (Reactor Methodology) ကို အသုံးပြုထားသည့်အပြင် စာသင်ခန်းတွင်းသင်ယူမှုထက် ကိုယ်တိုင်ပါဝင်မှုနှင့်အတွေ့အကြုံသင်ယူမှု (Experiential Learning) ကိုအဓိကထားသောကြောင့် ကျောင်းသားများသည် အကောင်းဆုံးသော သင်ယူမှုအတွေ့အကြုံကို ရရှိမှာကို ကျွနု်ပ်တို့အာမခံပါသည်။
စုစုပေါင်းသင်တန်းချိန် = နာရီပေါင်း (၁၅)နာရီအထိ၊ အတန်းချိန်ပေါင်း(၇)ချိန်
အနည်းဆုံး ကျောင်းသားဦးရေ = ၂၀
အချိုး = ၁:၂၀
- ဒီဇိုင်း (Design), စွန့်ဦးတီထွင်စီးပွားရေး (entrepreneurship & innovation) ကလပ်များ ရှိသောကျောင်းများ
- စွန့်ဦးတီထွင်စီးပွားရေး(သို့) အခြားစီးပွားရေးဆိုင်ရာ ပြိုင်ပွဲများဝင်ရန် ပြင်ဆင်နေသည့်အသင်းများ
စွန့်ဦးတီထွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအကြောင်းကို ထိရောက်စွာ လမ်းညွှန်သင်ကြားပို့ချသော သင်တန်းအစီအစဥ် (Entrepreneurship
မြင့်မားစွာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသော ဤသင်တန်းအစီအစဥ်သည် ကျောင်းသားများကို စွန့်ဦးတီထွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း (entrepreneurship) များ၏ အသိပညာအတွေးအခေါ်ကျွမ်းကျင်မှုတွေကို ပြဿနာရှာဖွေခြင်းမှစကာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်ခြင်းအထိ
သင်ကြားမျှဝေပို့ချပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါသည်။ ဤအစီအစဥ်တွင် Startup Weekend™ကိုပုံစံယူကာ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ စွန့်ဦးတီထွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၏ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်အတွေ့အကြုံများကို လုံခြုံသောအတန်းပတ်ဝန်းကျင်ထဲတွင် ဦးစွာလေ့လာထိတွေ့သင်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။
စုစုပေါင်းသင်တန်းချိန် = (၁၂) နာရီ၊နေ့တစ်ဝက်တန်းချိန် (၃)ရက်
စွန့်ဦးတီထွင်စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်မှု (Social Entrepreneurship)
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလူမှုရေးပြဿနာများဖြစ်သော အငတ်ဘေး၊ ဆင်းရဲမွဲတေခြင်း၊ အိမ်ခြေရာမဲ့ နှင့် လူကုန်ကူးမှုပြဿနာများသည် လက်ရှိ(၂၁)ရာစုတွင်ကြီးမားစွာ နေရာယူလျှက်ရှိပါသည်။
ထို့ကြောင့် ဤသင်တန်းအစီအစဥ်တွင် ၎င်းလူမှုရေးပြဿနာများကိုထောက်ထားကိုးကားကာ အတွေ့အကြုံမြင့်မားသောနည်းပြဆရာများက ကျောင်းသားများ၏ စာနာနားလည်မှု (empathy) တိုးတက်စေရန်အပြင် ထိရောက်မြင့်မားစွာစဉ်းစားသိမြင်စွမ်းဆောင်နိုင်စေရန် (critical thinking) လမ်းညွှန်သင်ကြားပို့ချပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါသည်။
စွန့်ဦးတီထွင်စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်မှုအကြောင်းအရာများ အပြင် ၎င်း
လူမှုရေးဆိုင်ရာစွန့်ဦးတီထွင်စီးပွားရေး (social entrepreneurship) နှင့် သာမန်စွန့်ဦးတီထွင်စီးပွားရေး (business entrepreneurship) တို့၏ ကွဲပြားခြားနားချက်များကိုပါ သင်ယူလေ့လာနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် အောင်မြင်နေသော လူမှုရေးဆိုင်ရာ စွန့်ဦးတီထွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၏ အကျင့်လက္ခဏာများ (traits & characteristics) ကိုလည်း သင်ကြားပို့ချပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါသည်။
ဒီဇိုင်းစဉ်းစားတွေးခေါ်ခြင်း (Design Thinking)
ဤDesign Thinking သင်တန်းအစီအစဥ်လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ကျောင်းသားများကို အစစ်အမှန်အတွေ့အကြုံ (authentic experience) ဖြင့် သင်ယူလေ့လာနိုင်စေရန် စွန့်ဦးတီထွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့်တိုက်ရိုက်တွေ့ဆုံခြင်း၊ ထိရောက်မြင့်မားစွာစဉ်းစားသိမြင်တီထွင်စွမ်းဆောင်နိုင်စေခြင်း (Critical & Inventive Thinking)ဖြင့် လမ်းညွှန်သင်ကြားပို့ချပေးသွားမှာဖြစ်ပါသည်။
Design Thinking သည် စာနာနားလည်မှု (empathy)ကို အခြေပြုကာ ကျောင်းသားများကို စာနာနားလည်မှုမြေပုံ (Empathy Map)၊ လေ့လာသုံးသပ်ခြင်းလေ့ကျင့်ခန်းများ (Observation Exercises)နှင့် အသုံးပြုသူ၏ အဆင်မပြေနာကျင်မှုအချက်များ (Pain Points)ကို အသုံးပြုသူ၏သုံးစွဲကာလ (User Journey) တစ်လျှောက်လေ့လာသုံးသပ်သွားမှာဖြစ်ပါသည်။
စုစုပေါင်းသင်တန်းချိန် = အတန်းချိန်ပေါင်း(၈)ချိန်၊ တစ်ချိန်လျင် (၂) နာရီ
စုပေါင်းဟောပြောပွဲအစီအစဥ် (Mass Assembly Programme)
MAP အစီအစဥ်သည် ပါဝင်သောပရိသတ်ပရိုဖိုင်အပေါ်မူတည် အကြောင်းအရာခေါင်းစဥ် (theme) ကွဲပြားသော ပွဲအစီအစဥ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
စွန့်ဦးတီထွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များကို သူတို့၏အတွေ့အကြုံများ ခဏတာမျှဝေပို့ချပေးစေချင်သလား၊ စွန့်ဦးတီထွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အသိပညာနှင့်နည်းစနစ်များအကြောင်းများ မျှဝေပို့ချပေးစေချင်သလား? သင်၏စိတ်ကြိုက်သင့်လျော်သော အကြောင်းအရာခေါင်းစဥ်ကို ပြောလိုက်ပါ။
စုစုပေါင်းသင်တန်းချိန် = စိတ်ကြိုက်လိုအပ်သလို ညှိနှုင်းတိုင်ပင်နိုင်ပါသည်။
(EntreGo Card Game)
EntreGo ကဒ်ဂိမ်းသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ခြင်း၏ အခြေခံအသိပညာပေးကဒ်ဂိမ်းဖြစ်သည်။ ကျောင်းသားများသည် စွန့်ဦးတီထွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း (Start-up & Entrepreneurship)ဆိုင်ရာ အသိပညာနှင့်နည်းစနစ်များကို EntreGoကဒ်ဂိမ်းမှတဆင့် စတင်သင်ယူလေ့လာနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
စုစုပေါင်းသင်တန်းချိန် = (၂) နာရီ
အနည်းဆုံး ကျောင်းသားဦးရေ = ၁၀
ဤသင်တန်းအစီအစဥ်ကို နည်းပြဆရာနှင့် အတူ(သို့)မပါဘဲကျင်းပနိုင်ပါသည်။
စိတ်ကြိုက်သင်တန်းအစီအစဥ်များ (Customized Programmes)
သင်၏ကျောင်းသင်တန်းအစီအစဥ်အတွက် စိတ်ကြိုက်တိကျမှန်ကန်သောလိုအပ်ချက်များရှိပါက ကျွနု်ပ်တို့၏ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းပညာရှင်နှင့်ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။ သင့်စိတ်ကြိုက်သင့်လျော်သောသင်တန်းအစီအစဥ်များ ထည့်သွင်းဖန်တီးပေးရန် အမြဲအဆင်သင့်ပါ။
သင့်ကျောင်းအတွက် သင့်လျော်သော သင်တန်းအစီအစဥ်များ တီထွင်ဖန်တီးပေးရန် ​အကူအညီလိုပါသလား?
ကျွနု်ပ်တို့၏ ဖော်ရွေသော chatbot, Spegg the space egg နှင့် လာရောက်ပြောဆိုလိုက်ပါ။ သင်၏ကျောင်း သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းအတွက် သင့်လျော်သောသင်တန်း နှင့် အစီအစဥ်များ တီထွင်ဖန်တီးပေးရန် အမြဲအဆင်သင့်ပါ။
သင်တန်းအစီအစဥ်များ တီထွင်ဖန်တီးကျင်းပပေးခဲ့ဖူးသော ကျောင်းအဖွဲ့အစည်းများ
ကျွနု်ပ်တို့၏ စီးပွားရေးမိတ်ဖက်၊ကျောင်း နှင့် အဖွဲ့အစည်းများ
Nanyang Technological University (IdeasINC)
National University of Singapore (iLead)
Singapore Management University (SMU Eagles Inc, SMU Real Business)
NTUC (AUPE, Care & Share, UWEEI, FDAWU)
ကျွနု်ပ်တို့၏ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းပညာရှင် နှင့်
Reactor Blog >
For Educators (REN) >
+65 6514 9225